June 30, 2021 - Channel Lover
“မြေကြီးက ရွှေသီးတယ်”ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ရွှေအစစ်တွေ ထွက်တဲ့ သစ်ပင်အကြောင်း
June 30, 2021 by Channel Lover
သိပ္ပံ ပညာရှင် တွေက ရွှေကြောရှာဖွေ ရင်းနဲ့ ရွှေတွေ သီးနေတယ်လို့ ဆိုလို့ရတဲ့ ယူကလစ် သစ်ပင်တွေကို မတော်တဆ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပင်တွေကို ဘယ်လို အသုံးချ ကြမလဲ။ ပုံပြင်ထဲမှာတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်း တွေကို အပင် တွေဆီက ခူး ယူကြတာ ကြားဖူး ကြမှာပါ။ ရှေးတုန်း ကလဲ ပစ္စည်းတွေ သီးတဲ့ ပဒေသာပင် ဆိုတာ ရှိခဲ့တယ်လို့ လူကြီးတွေက ပြောဖူးကြ ပါတယ်။ ကဲအခု ကတော့ ပစ္စည်းတွေ သီးတဲ့ အ ပင်တွေ အကြောင်းတော့ မဟုတ် ပေမယ့် ရွှေထွက်တဲ့ သစ်ပင်တွေ အကြောင်း ပြောပြမှာပါ။ ရွှေထွက်တဲ့ သစ်ပင်တွေ တွေ့တဲ့ နေရာ ကတော့ ခြောက်သွေ့တဲ့ … Read more
ငွေဝင်လာဘ်ရွှင်ခါနီးပြီဆိုလျှင် ပြလေ့ရှိသည့် ရှေ့ပြေးနိမိတ်များ
ငှဝေငျလာဘျရှငျခါနီးပွီဆိုလြှငျ ပွလရှေိ့သညျ့ ရှပွေ့ေးနိမိတျမြား ပိုကျဆံဝငျခါနီးဆိုရငျ ပွလရှေိ့တဲ့ ရှပွေ့ေးနိမိတျ (၇)မြိုး။ တဈခြို့အိမျမကျတှကေ ရှမှေ့ာဖွဈလာတော့မယျ့ အရာတှကေို နိမိတျပွတဲ့အိမျမကျမြိုးတှရှေိပါတယျ ဒီလိုအရာတှကေို မယုံကွညျတဲ့လူမြိုးတှေ ရှိကောငျးရှိနိုငျပမေယျ့ အပွငျမှာတကယျလညျးဖွဈခဲ့ ရှိခဲ့တယျဆိုတဲ့ သာဓကတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ ပိုကျဆံဝငျခါနီးရငျ ဘယျလိုအိမျမကျမြိုးတှေ မကျလရှေိ့လဲဆိုတာကို ပရိတျသတျကွီးအတှကျ အောကျမှာဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ ၁။ နို့ ဒါမှမဟုတျ ပြားရညျ အိမျမကျထဲမှာ နို့တှကေိုမကျတာ ဒါမှမဟုတျ ပြားရညျကို မကျတာမြိုးကမကွာခငျမှာ ငှဝေငျတော့မယျဆိုတဲ့နိမိတျပါပဲ ဥပမာပြားအုံကွီးကို ပြားရညျညှဈတာမြိုး နှားနို့ညှဈတာမြိုးနို့တှကေ လမျးတှပေျေါမှာ ဖုံးလှမျးနတောမြိုး အစရှိတဲ့အိမျမကျမြိုးပါ။ ၂။ ရှနေဲ့ လကျဝတျရတနာ ရှဆေိုတာက ခမျြးသာကွှယျဝမှုရဲ့ လက်ခာဏာတဈခုပါ ကိုယျ့ရဲ့အိမျမကျထဲမှာရှတှေကေိုမွငျမကျရငျလညျး ဒါဟာ မကွာခငျမှာ ခမျြးသာတော့မယျဆိုတဲ့ ရှပွေ့ေးနမိတျဖွဈပါတယျနောကျတဈခုကတော့ အိမျမကျထဲမှာ နားကပျပနျရတယျ။ လကျစှပျတှဝေတျရတယျဆိုပွီး မကျတာမြိုးပါ အဲ့လိုမကျနပွေီဆိုရငျတော့ မကွာခငျမှာ … Read more
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သားဖြစ်သူရေမွန်ကိုအစစအရာရာစောင့်ေ၇ှာက်ပေးတဲ့သူတွေကို ရေမွန်ရဲ့မိခင်မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလာခဲံတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ”မနေ့(29.6.21)က တွတ်ပီရဲ့ရက်လည်ပါရက်လည်ဆိုရင် သိသူမသိသူ ခင်သူမခင်သူအားလုံး ဖိတ်ကြားရတာထုံးစံပါဒါပေမဲ့. .အခန်းအနေအထား လက်ရှိကျန်းမာရေးအန်တရာယ်လာရောက်သူတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုစိုးရိမ်ငဲ့ညှာရတာကြောင့်F.b ပေါ် စာတင်ပြီး အားလုံးကို မဖိတ်ခဲ့နိုင်ဘူးစိတ်ရှိတိုင်းသာ‌ဆို ရွာလုံးကျွတ်ပေါ့နားလည်ခွင့်လွှတ်စာနာပေးနိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ် ပျက်ကွက်မှုအတွက် ချစ်ခင်ရသူများသို့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်.သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်တည်ရှိခဲ့ရာဟိုးအဝေးမှာလဲယုံကြည်စိတ်ချရသူတွေကိုလွှဲအပ်ပြီးရက်လည်ဆွမ်းသွပ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် လာဖြစ်သူ မလာဖြစ်သူ လာနိုင်သူ မလာနိုင်သူလာခွင့်ရသူ မရသူကိုယ်နဲ့ထပ်တူသူ့ကိုချစ်ပေး နှမြောပေး စိတ်ထိခိုက်ပေး ခံစားပေးခဲ့ကြတဲ့ရင်ဘတ်တူသူ ရင်ခုန်ဘက်အားလုံးကိုလှိုက်လှဲစွာ. . ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လွမ်းသူ့ပန်းခြင်း၊လှူ ဖွယ်သင်ဃန်းအစားအစာ၊ အလှူငွေ (ကိုယ်တိုင်/တဆင့်K pay) အစရှိသဖြင့် ကျန်ရစ်သူတို့မျက်နှာမငယ်အားမငယ်ရအောင်အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှပါဝင်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြတဲ့ချစ်ခင်သူအားလုံး၊ ဂီတလောကမှညီအကိုမောင်နှမများ(တစ်ဦးချင်းနံမည်ရေးရင်မိုးချုပ်သွားမှာမို့ မရေးပြတော့ဘူးနော်)အခြေအနေအရလူချင်းမဆုံနိုင်ကြလို့ လိုင်းပေါ်ကစာနာခံစား၊ငိုကြွေး၊ခွန်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ချစ်ခင်သူများအားလုံး ရင်ထဲကလှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်.အထူးသဖြင့် လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုယ့်မိသားစုခေတ်တ ခိုလှုံေ နွးထွေးခဲ့ရာ. ဒေသခံရွာသူရွာသားများမြို့သူမြို့သားများ.နာရေးအစမှအဆုံး ထောင့်စေ့အောင် ချစ်ခြင်းမြစ်တာဖြင့်ကူညီခဲ့ကြသူ၊လှူဒါန်းခဲ့ကြသူများ၊ငိုကြွေးခဲ့ကြသူများ၊နောက်ဆုံးခရီးလာရောက်ပေးကြတဲ့နယ်ခံပရိသတ်များ၊မှတ်တမ်းတင်ဗွီဒီယိုအဖွဲ့သားများခိုလှုံခဲ့ရစဉ်ကာလတွေမှာဆွေမျိုးမတော်စပ်ပေမဲ့ တွတ်ပီနဲ့မိသားစုအားလုံးအပေါ် နွေးထွေးစွာ‌ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်‌ချစ်ခင်ပေးခဲ့ကြတဲ့(တွတ်ပီကိုအရမ်းချစ်တဲ့) အမိုး နဲ့အဖွဲ့ဝင်မိသားစုများ(လုံခြုံမှုအရ တစ်ဦးချင်းအမည်‌များမဖေါ်ပြတော့ပါ)၊ တုံတုံ‌လေးကိုအရိပ်ကြည့်အနီးကပ်စစာင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ဖိုးခွား(ဗိုက်ကလေး)ဒီအချိန်တစ်ယောက်ထဲကြေကွဲငိုကြွေးနေမဲ့တွတ်ပီချစ်ရတဲ့ညီ‌လေး သား NOVEMနာရေးအစမှအဆုံးထိ လှည့်မကြည့်ရအောင်အစစစိတ်ချအားကိုးခဲ့ရတဲ့သမီး သော်သော်(မြေးချွေးမ‌လောင်းလေး))ရန်ကုန်မှာတော့ … Read more
ယနေ့ ဇှနျလ (၃၀) ရကျ ညနပေိုငျးမှာ ပွနျလညျလှတျမွောကျလာပွီဖွဈတဲ့ မတေိုးခိုငျ အနုပညာရှငျတှေ အမြားစုကတော့ မွနျမာ့အရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ပရိသတျတှနေဲ့အတူ အပွညျ့အဝရပျတညျခဲ့ကွပါတယျ ။ သူတို့ရဲ့ အောငျမွငျတှေ ကြျောကွားမှုတှကေို မကေ့ာ ပွညျသူတှနေဲ့ တဈသားတညျး လမျးမပျေါအထိထှကျကာ ဆန်ဒထုတျဖျောခဲ့ကွတာပါ ။ ဒါ့အပွငျ သူတို့ရဲ့အကောငျ့တှကေနလေညျး အစှမျးကုနျနရေ့ောညပါ soeak out တှလေညျး လုပျခဲ့ကွပါတယျ ။ ဒါ့ကွာငျ့လညျး ပုဒျမ (၅၀၅-က) နဲ့ တရားစှဲဆိုခံရသူတှေ ရှိသလို တဈခြို့ နာမညျကွီး အနုပညာရှငျတှဆေို ကံမကောငျးစှာနဲ့ပဲ ဖမျးဆီး ခံခဲ့ကွပါတယျ ။ ဒီမနကျအစောပိုငျးလောကျမှာတော့ ဖမျးဆီးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှငျတှအေပွငျ အခွား နိုငျငံရေးသမားမြားကို လှတျပေးမယျဆိုတဲ့ သတငျးတှေ ထှကျရှိခဲ့ပါတယျ ။ အားလုံးကလညျး ရငျခုနျစှာနဲ့ … Read more
မီးပျက်နေတဲ့ မင်္ဂလာဦးညပြီး နောက်နေ့နေ့လည်ထိ မထွက်နိုင်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့အဖြစ်
ကိုေ မာငျကောငျးနဲ့မခြောဘုံတို့ ဒီနမေ့င်ျဂလာဆောငျကွပွီး အကွငျလငျမယားဘဝရောကျကွပါတယျ။ နှဈဘကျမိဘကလဲ ပွညျ့စုံလှတာမဟုတျတော့ မင်ျဂလာစရိတျလေးရဖို့တောငျ နှဈတျောတျောကွာ စုခဲ့ရတာလေ။ ဒီတော့သူမြားတှလေို ပြားရညျဆမျးခရီးတှေ၊ ဘာတှလေညျး မထှကျနိုငျပါဘူး။ ကိုမောငျကောငျးမိဘအိမျမှာပဲ မင်ျဂလာဦးညကို လှနျမွောကျခဲ့ရပါတယျ။ မနကျမိုးလငျးတော့ ကိုမောငျကောငျးရဲ့ညီလေးဖွဈတဲ့ မောငျရှအေေးဟာ ကြောငျးသှားခါနီး အမပွေငျဆငျပေးတဲ့ မနကျစာကို စားနရေငျး… “အမေ…။ အကိုနဲ့အမ ထကွပွီလား” “မထကွသေးဘူး…” “ကနြျောတှေးမိတာကတော့…” “ကိုယျ့ဖာသာ စားမှာကိုမွနျမွနျစားစမျးပါဟာ…။ တျောကွာကြောငျးနောကျကနြအေုနျးမယျ…” ဒီလိုနဲ့ မောငျရှအေေးလဲ မနကျစာစားပွီး ကြောငျးထှကျသှားပါတယျ…။ မုနျ့စားကြောငျးဆငျးတော့ ကြောငျးနဲ့အိမျက နီးနတေဲ့အတှကျ မောငျရှအေေးက အိမျပွနျလာပွီး ထမငျးစားလေ့ ရှိပါတယျ…။ ထမငျးစားနရေငျး ခူးခပျပွငျဆငျပေးနတေဲ့ အမကေို… “အမေ…။ အကိုနဲ့အမ ထကွပွီလား…” “မထကွသေးဘူး…” “ကနြျောတှေးမိတာကတော့…” “ဟာ…။ ကလေးက ကလေးလိုနစေမျး…။ နရောတကာဝငျမပါစမျးနဲ့…” အဟောကျခံရတော့ … Read more
အင်းစိန်ထောင်ရှေ့မှာ စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ လူအုပ်ကြီး(ရုပ်သံ)
အင်းစိန်ထောင်ရှေ့မှာ စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ လူအုပ်ကြီး(ရုပ်သံ) စစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးထားသူများကို ပြန်လွှတ်ပေးမည် ဆိုသည့် သတင်းကြောင့် အင်းစိန်ထောင်ရှေ့တွင် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် မိသားစုဝင်များကို ယနေ့ ညနေ ၄ နာရီ အချိန်တွင် တွေ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ၂၃၄၂ ဦး လွှတ်မည်ဟု ဇော်မင်းထွန်းပြော မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော စစ်ကောင်စီက ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ နိုင်ငံတော်အာဏာကို သိမ်းယူပြီးနောက် ဖမ်းဆီးခံရသူ ပြည်သူများအနက်မှ ပြည်သူ ၂၃၄၂ ဦးကို ယနေ့ လွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကောင်စီ ပြောခွင့်ရ ဇော်မင်းထွန်းက သတင်းမီဒီယာများသို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည်။ လက်ရှိတွင် လွှတ်ပေးမည့် အရေအတွက်သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လွှတ်ပေးမည့်အရေအတွက်ဖြစ်သော်လည်း မည်သူများပါဝင်မည်၊ မည်သည့်ဥပဒေပုဒ်မများဖြင့် ဖမ်းဆီးခံထားရသူများကို လွှတ်ပေးမည် စသည့် အချက်အလက်များကို … Read more
ယနေ့ အင်းစိန်ထောင်မှလွတ်လာကြသော အနုပညာရှင်များ
ယနေ့ အင်းစိန်ထောင်မှလွတ်လာကြသော အနုပညာရှင်များ ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲခံထားရသည့် အနုပညာရှင်များအနက် ဒီနေ့ လွတ်မြောက်လာသူတွေကတော့ ပိုင်တံခွန်နှင့် အူဝဲတို့ဖြစ်ကြောင်း ကနဦးသတင်းအရ သိရှိရပါတယ်…။ နောက်ထပ်ဘယ်သူတွေ ပါသေးလဲဆိုတာကို ဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်…။ ယနေ့ အင်းစိန်ထောင်မှလွတ်လာကြသော အနုပညာရှင်များ 1 ယနေ့ အင်းစိန်ထောင်မှလွတ်လာကြသော အနုပညာရှင်များ2ယနေ့ အင်းစိန်ထောင်မှလွတ်လာကြသော အနုပညာရှင်မျာ3းယနေ့ အင်းစိန်ထောင်မှလွတ်လာကြသော အနုပညာရှင်များ4ယနေ့ အင်းစိန်ထောင်မှလွတ်လာကြသော အနုပညာရှင်များ5ယနေ့ အင်းစိန်ထောင်မှလွတ်လာကြသော အနုပညာရှင်မျာ6းယနေ့ အင်းစိန်ထောင်မှလွတ်လာကြသော အနုပညာရှင်များ7ယနေ့ အင်းစိန်ထောင်မှလွတ်လာကြသော အနုပညာရှင်များ 8 unicode ယနေ့ အငျးစိနျထောငျမှလှတျလာကွသော အနုပညာရှငျမြား ၅၀၅(က) ဖွငျ့ တရားစှဲခံထားရသညျ့ … Read more
ရေမွန် မဆုံးပါးခင်က ရေးသားပေးခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးကို ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာ အမှတ်တရ ဆိုပြလာတဲ့ မေရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
Idiots အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်ရေမွန် ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သတင်းက အခုထိ ဘယ်သူမှ မယုံကြည်နိုင်သေးသလို ပရိသတ်တွေရော ခင်မင်ရသူတွေပါ မိသားစုနဲ့အတူ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရည်အချင်းရှိတဲ့ အဆိုတော်ကောင်း တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အပေါ် အနုပညာရှင် အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပါ ။ ရေမွန်ကို ချစ်ခင်ကြသူ အားလုံးကလည်း ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ ပြုလုပ်ပေးကြသလို သစ်ပင်လေးတွေလည်း အမှတ်တရ စိုက်ခဲ့ကြပါတယ် ။ တစ်ချို့ကလည်း သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မှာ ရေမွန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို တစ်သက်လုံး ကျန်ရှိနေစေချင်တာကြောင့် တက်တူးများ ထိုးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။ ရေမွန်ကို ချစ်ခင်ကြတဲ့ သူတွေအားလုံးကတော့ ခုချိန်အထိ မမမေ့နိုင်သေးဘဲ လွမ်းဆွတ် သတိရနေကြဆဲဆိုတာ အမှန်ပါပဲနော် ။ အခုလည်း ရေမွန်ရှိစဉ်က … Read more
” တောင်ကြီးမြို့က ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ရေမွန်အမှတ်တရအနေနဲ့ ရေမွန်ပုံရိပ်တွေနဲ့ အခန်းလေးကိုပြုလုပ်ထား”
” တောင်ကြီးမြို့က ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ရေမွန်အမှတ်တရအနေနဲ့ ရေမွန်ပုံရိပ်တွေနဲ့ အခန်းလေးကိုပြုလုပ်ထား” တောင်ကြီးမြို့က ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ရေမွန်အမှတ်တရအနေနဲ့ ရေမွန်ပုံရိပ်တွေနဲ့ အခန်းလေးကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ရေမွန်ကို လွမ်းဆွတ်ခြင်းအားဖြင့်ဆိုင်ကိုလာတဲ့လူငယ်လေးတွေ ဖန်တွေ အတွက် အမြဲသတိရအမှတ်ရစရာအမှတ်တရနေရာလေးတစ်ခု အဖြစ်ထားထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Idiots Raymond Room လုပ်ထားတဲ့ အခန်းက Customer table မထားဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။ တောင်ကြီးလာရင် Raymond Room လေးကို သတိတရ ဝင်လာလို့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ credit unicode ” တောငျကွီးမွို့က ဆိုငျတဈဆိုငျမှာ ရမှေနျအမှတျတရအနနေဲ့ ရမှေနျပုံရိပျတှနေဲ့ အခနျးလေးကိုပွုလုပျထား” တောငျကွီးမွို့က ဆိုငျတဈဆိုငျမှာ ရမှေနျအမှတျတရအနနေဲ့ ရမှေနျပုံရိပျတှနေဲ့ အခနျးလေးကိုပွုလုပျထားပါတယျ။ ရမှေနျကို လှမျးဆှတျခွငျးအားဖွငျ့ဆိုငျကိုလာတဲ့လူငယျလေးတှေ ဖနျတှေ အတှကျ အမွဲသတိရအမှတျရစရာအမှတျတရနရောလေးတဈခု အဖွဈထားထားခွငျးဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။ Idiots Raymond Room လုပျထားတဲ့ … Read more
ပန်ဆယ်လို အမေရိကန်မှာ ဖမ်းခံရပြီဆိုတဲ့သတင်း
ပန်ဆယ်လို အမေရိကန်မှာ ဖမ်းခံရပြီဆိုတဲ့သတင်း ပန်ဆယ်လိုကို အမေရိကန်မှာ အဖမ်းရတယ်ဆိုပီး သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ် ထိုသတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ပန်ဆယ်လိုက အဖမ်းမခံရတဲ့အကြောင်း အခုလို ပြောလာပါတယ် ပိန်းပိန်းတို့ ဂရုနဲ့လည်း ခက်ပြီ အကောင့်ခဏပိတ်ခံရတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး မေဒိကန်မှာ ဖမ်းခံရပြီတို့၊ ကားတိုက်သေပြီတို့ ထလုပ်တယ်။ ဒီအကောင့်ကလည်း ပြန်ပေါ်လာရော အလှူငွေတွေ ဘုံးချင်လို့ အကောင့်ပိတ်ပစ်တာလို့ ဖွပြန်တယ်။ အခုအချိန်မှာ ပန်ဆယ်လိုဆို နာမည်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာက ငါ့အတွက် ငါ့ဘဝရော၊ ငါ့တစ်မိသားစုလုံးရဲ့ ဘဝတွေနဲ့ရော ရင်းထားရတာ။ ငွေမြင်ရင် ငမ်းငမ်းတက်တဲ့ နင်တို့စိတ်ဓါတ်တွေက ကိုယ့်စိတ်နဲ့ မနှိုင်းနဲ့လေ။ အလှူငွေက အဖွဲ့ဆီ လွှဲပြောင်းပေးပြီးပြီ။ ငါတို့ တစ်ဂရုလုံး ပူးပေါင်းလုပ်ကြတာမို့ ငါတို့ဘက်က ရှင်းလင်းပြီးသား။ ဘယ်သူ့လက်ထဲထည့်ပြီး ဘာတွေဝယ် ဘာတွေလုပ်ပါတယ် စာရင်းပြရအောင် နင်တို့လို … Read more
ထိုင်းချဲ 3D Live တိုက်ရိုက် ကြည့်ရန် ရှယ်ထားပါ….